RIPPERS / THUMBS / RAKES abavelisi kunye abaxhasi - China RIPPERS / THUMBS / RAKES Factory
I-BONOVO ODM OEM PIN-ON hydraulic isithupha sebhakethi sokwakha iindawo zoomatshini
I-Bonovo Pin-on Hydraulic Thumb eyenzelwe umatshini othile. Ukusebenza ngokufanelekileyo koomatshini abancinci kunye noomatshini abakhulu. Uyilo oluhlanganisiweyo kumacwecwe asecaleni kunye neminwe yamandla amakhulu, ukuhanjiswa okukhethekileyo kweminwe yokwandisa amandla okubamba.
Ixabiso leBONOVO leFektri kraca lomhlaba omtsha wokucoca iirakethi zentonga ye-1-100 yeetoni yesivalo
IBonovo Rake ilungele ukucoca ngokukhawuleza, ukulawulwa kwezityalo, ukuhluzwa komhlaba / amatye kunye nokususa izihlahla ezingafunekiyo kunye nokugqitha. Izinto eziphathekayo zinokuhluzwa kwaye zihlelwe ukuze kucocwe inkunkuma engafunekiyo kwaye kushiye umhlaba olungileyo okanye izinto ezibonakalayo ngasemva. Zombini zijikile kwaye zijonge phambili.
I-BONOVO i-Backhoe isithupha somatshini sokuthengisa kunye nokuthengisa
I-Bonovo Mechanical Thumb ibonelela ngendlela efanelekileyo nefikelelekayo yokuphatha amatye, ibrashi, iziphunzi zomthi, imibhobho kunye nezinye izinto ekunzima ukuzenza. Thatha phezulu kwaye ubeke izinto ngolawulo olupheleleyo. Esi sisixhobo esifunekayo sokudiliza, ukucoca umhlaba nayo yonke imisebenzi yokuvuna. Umatshini, i-hydraulic, i-weld-on kunye ne-bolt-on type zonke ziyafumaneka.
Ikhonkco leBONOVO Excavator kwi-hydraulic thumb ye-mini digger excavator
I-Bonovo Qhagamshela kwi-Hydraulic Thumb elungiselelwe ukumila kweemele zakho kwaye zenziwe ngentsimbi eyomeleleyo. Kukho uluhlu lweemodeli ezikhoyo. Ukujikeleza okungu-145 ukuya ku-180.
I-Bonovo esandula ukuyilwa kunye nokusebenza ngokuqhekeka kwamatye 2 ukuya kwi-85 yeeripper
IBonovo Rock Ripper inokukhulula ilitye eligugileyo, itundra, umhlaba onzima, ilitye elithambileyo kunye noluhlu lwamatye aqhekekileyo. yenza ukumba kumhlaba onzima kube lula kwaye kube nemveliso ngakumbi. I-Rock Ripper sisincamathiselo esifanelekileyo sokusika nakweyiphi na indawo enzima, edibana nayo kwindawo osebenza kuyo.
I-Bonovo Rock ripper kufuneka iyilelwe ukugqobhoza kwaye ibale ezona ndawo zinzima ngokulula ngokuvumela ukukrazula okusebenzayo phantsi kweemeko ezahlukeneyo. Oku kuya kuqinisekisa ukuba i-shank yakho ikrazula loo nto kunokuba uyilime. Oku kuthetha ukuba uya kwenza kube lula, ukurhabula okunzulu ngaphandle kokubeka umthwalo omninzi kumatshini.